Booliska oo sheegay in ay hayaan eedeysanayaal ay ku tuhmeen dilkii Xildhibaan Boqore – Kalfadhi
Booliska Soomaaliya ayaa sheegay in ay soo xireen eedeysanayaal ay ku tuhumeen iney ku lug lahaayeen dilkii shalay loogu geystay Muqdisho Xildhibaan Cismaan Cilmi Boqorre. Taliyaha Hogaanka Canshuuraha Ciidanka Booliska, Cabdullaahi Xasan Bariise, ayaa u sheegay suxufiyiinta in ay, sidoo kale, hayaan gaari ay wateen ragga dilka Xildhbaanka geystay.
“Ciidanka Boliisku waxa uu gacanta kusoo dhigay baabuurkii lagu tuhunsanaa eedeysanayaasha in ay wateen iyo laba eedeysane oo kale” ayuu yiri Bariise. Intaas waxa uu raaciyey in ay Boolisku wali wadaan hawlgalo ay ku baadi goobayaan xogo iyo eedeysanayaal kale, oo uu Bariise sheegay in ay suurtagal tahay in lagu helo caddeymo iyo dad kale oo dheeraad ah, oo falka lagu dhaafiyey naftiisa Xildhibaanka xiriir la leh.
“Baarista natiijadeeda ma rabo inaan hadda hordhaco, laakiin waxaan rabaa inaan bulshada Soomaaliyeed la wadaagno inaan kiiskaas laga seexan, laguna raad joogo” ayuu yiri Bariise. “Dhagar-qabayaashii gacantooda uu ku sababeystay (Xildhibaan Boqore) mar dhaw ayaa la horkeeni doono cadaaladda” ayuu hadalkiisa raaciyey.
Allaha u naxariistee, Xildhibaan Cismaan Cilmi Boqore waxa ay shalay fiidkii koox ku hubeysneyd baastooladu ku toogteen nawaaxiga hoygiisa oo ku yaala meel aad ugu dhaw Xarunta Degmada Kaaraan ee magaalada Muqdisho, kuwaas oo la sheegay in ay meesha isaga carareen durbadiiba.
Xarakada Al-shabaab ayaa sheegatay dilkiisa, sida lagu soo qaray Feysbuug lagu qoro wararka Al-Shabaab, kaas oo sheegay inuu Xildhibaanku horay ugu sheegay inuu u baqayo ammaankiisa, dowladduna ay dayacday, sida lagu soo qoray Feysbuuggaas.
Madaxweynayaal hore, dowladda, Xildhibaanno, siyaasiyiin iyo qeybo kale oo bulshada ka mid ayaa ah ka tacsiyeeyey dilka Xildhibaan Boqore, oo kasoo tirsanaa Baarlamaanka Soomaaliya ilaa sanadkii 2000, isagoo mar soo ahaa Guddoomiye Kuxigeenka 2-aad ee Golaha Shacabka – dowladdii lagu soo dhisay Kiinya, waxa uuna ahaa Xubin si firfircoon uga dhex muuqday Baarlamaanka.
Waxaa uu ahaa da’ cimrigiisa sartii uga noqday Guddoomiye Ku-meel-gaar ah Golaha Shacabka ee hadda intuusan dooran Guddoonkiisa, waayadii dambana aad ugama qeyb ahayn doodaha Golaha ee masrax joogsiga ah. Hadal jeedinadiusii ugu dambeeyey waxay u badnaayeen islaaxinta iyo dejinta mararka ay xiisado siyaasadeed ka dhex kacaan Golayaasha Dowladda.
Xildhibaan Cismaan Cilmi Boqore waxaa maanta lagu wadaa in lagu aaso Muqdisho, iyada oo ay Dowladda Federaalka Soomaaliya (DFS) waddo qabanqaabada “Aas Qaran” oo Xildhibaanka loo sameeyo, taas oo ay kasa kow Golayaasha iyo Hay’adaha Dowladda ay ka qeyb-qaadanayaan qeybo kale oo bulshada ka mid ah.